Asengene amanzi endlini: ICoronavirus isisemagcekeni - Bayede News
Kulabo abangongoti bekuvele kukhona ukuvumelana ekutheni umkhuhlane osubatshazwa emazweni angaphezu kwamashumi amahlanu, iCoronavirus uzofi ka eNingizimu Afrika. Obekungatshazwa wukuthi uyofi ka nini nokuthi uyofi kela kuphi. Le mpendulo kushone elayizolo isitholakele emveni kokuthi uNgqongqoshe Wezempilo kuleli uDkt uZweli Mkhize ememezele ukuthi neNingizimu Afrika seliyihlabile iva. Esitatimendeni uDkt uMkhize uthe kutholwe insizwa ebivakashele e-Italy nebe isixinwa wukugula okuthe kungalandelelwa kwatholakala ukuthi isinalesi sifo. Lokhu, ngokukaDkt uMkhize kuqinisekiswe ngabeNational Institute for Communicable Diseases. ElaboHlanga linalo igama lalesi siguli nokho ngokuhlonipha umndeni nanokulandela imithetho elawula ilungelo lesiguli ngeke silikhiphe.
Yize ekuqaleni kwesonto esithangamini sabezindaba uDkt uMkhize eqinise idolo abakuleli ngokuthi isifo lesi siyosifi ca silindile lokhu akuvimbanga ukwesaba esizweni. Ukuwesaba okukhulu wukuthi ngabe izinhlelo zezwe zimi kanjani nokuthi konje uyothi uvakashela kobantu emijondolo, emalokishini, emarenki, ezinkonzweni zePhasika, ezinkulisa nasezikoleni nasemakhaya kuyobe kunjani. Lezi yizindawo ngokomlando nokuhleleka kwezindawo eziba nabantu abaningi kakhulu boHlanga. Sikhuluma kuvulwa iSishayamthetho saKwaZulu-Natal ISILO siphawulile ngobumqoka bokungadali ingebhe kunalokho kubanjiswane emizanweni yokukhalima lo mkhuhlane. “Okunye esibhekene nakho wumkhuhlane osubhebhetheke cishe emazweni angamashumi amahlanu nowaziwa ngeleCoronavirus. Akungabazisi ukuthi lo mkhuhlane uyoba nomthelela omubi hhayi kuphela empilweni yabantu kulelo nalelo lizwe kepha nasemnothweni wamazwe.
Akudingi ukuba ngigcizelele ukuthi njengezwe kumele sizibambe ziqine ngoba uma sike sadembesela kuyoba nenhlekelele engeke yakhetha bala lamuntu nasikhundla. Ngalesi sikhathi esinzima nginxusa umphakathi ukuthi ubambisane nabezempilo futhi ungadukiswa ngamawongowongo abuye abhalwe ezinkundleni zokuxhumana kunalokho abalalele imiyalelo kaHulumeni nabezempilo,” kusho Omdala ngoLwesibili. Izolo noMengameli uRamaphosa naye unxuse ukuba izakhamizi zakuleli zingatatazeli khona lapho wakuveza ukuthi kunzimana: “ Lokhu kuzoba yinhlekelele esizweni futhi kuzoba nomthelela kokuningi,” kusho uMengameli.
Sidlavuza umnotho wamazwe Muva nje lo mkhuhlane kawusakhinyabezi nje abantu ngokwempilo kepha usuqalile nokudlavuza iminotho yamazwe. Ukuhlasela kwalo mkhuhlane kungene ngenxeba elingajwayelekile ngoba uqale ezweni lesibili ngamandla omnotho emhlabeni iChina ulandela owase-United States of America (USA). Akukho ukungabaza ukuthi okwenzeka emnothweni waseChina kuzothatheleka kwenabele nakwamanye amazwe ikakhulukazi lawo ancela kuyo iChina. Ebika eseChina oshicilelweni olwedlule uNks uZanele Buthelezi waveza isithombe samanye amadolobha akhala ibhungezi ngenxa yakho belu ukwesaba kwabantu kanye nezinhlelo zokuthiba ukubhebhetheka komkhuhlane. Imibiko yakamuva ithi nempilo nje yansuku zonke iphazamisekile njengoba abantu sebengelona uvanzi.
Ongoti bezomnotho bathi lesi sifo siqale ukukhubaza ezomnotho khona eChina lapho kubonakala khona ukuthi ukukhula komnotho waleliya lizwe kuzokwehla ngama-4.5%. Lokhu ukwehla komnotho eChina okukhulu osekwenzeka eminyakeni eminingi edlule. Ongoti bathi kodwa likhona ithemba lokuthi uma sesinqotshiwe lesi sifo, ukukhula komnotho waleli lizwe kuyobuyela esimeni sakho. Enye yezinto ezikhombisa umthelela omubi walesi sifo eChina ukuthi ukuhamba kwezinto, kanye namaphathi ezinto ezahlukene kuphazamiseke kakhulu. Lokhu akulimazi iChina kuphela kodwa namanye amazwe omhlaba athola lezi zinto eChina. Lokhu kwenza izinkampani ezinkulu emhlabeni ezifana no-Apple noNissan ziphazamiseke emisebzini yazo. ICoronavirus isiphazamise iminotho yamazwe emhlabeni ngokwehlisa ukudingeka kukawoyela emhlabeni. Abacwaningi bezomnotho bathi ukudingeka kukawoyela emhlabeni kuzokwehla ngemiphongolo eyizi-435 000 engxenyeni yokuqala yonyaka wezi-2020.
Lokhu kusho ukuphazamiseka okukhulu eminothweni yamazwe akhiqiza uwoyela. Lapha sifaka phakathi amazwe aseMiddle East nambalwa asezwenikazi i-Afrika. Ukuphazamiseka kweminotho yamazwe omhlaba ngokuqubuka nokubhebhetheka kweCoronavirus sekubonakele kakhulu embonini yokuhamba ngamabhanoyi. Imali etholakala embonini yamazwe amaningi emhlabeni kubonakala ukuthi izokwehla kakhulu. Ongoti bomnotho wamabhanoyi nokuhamba kwawo bathi imali etholakala embonini yamabhanoyi izokwehla ngezigidigidi ezi-$4 kuya kwezi-$5 engxenyeni yokuqala yonyaka wezi-2020. Lokhu kwenzeka ngoba amazwe amaningi aphoqekile ukuba amise ukusebenza kwamabhanoyi awo ngenxa yokubheduka kwalesi sifo. Ziphazamiseke kakhulu ezokuhamba ngamabhanoyi ngoba abantu abaningi bazimisile izinhlelo zokuhamba kwabo umhlaba wonke.
Izinkampani zizothwala kanzima Ngesikhathi kuvela umbiko ngosekwenzeke kuleli iningi labantu liphawule ngokwesabela izingane zesikole kanjalo nesimo sasemsebenzini. Lokhu kukhathazeka ikakhulukazi ezinkampanini kukhinyabeze ngisho izinkampani ezinkulu emhlabeni. Siye koshicilela izolo sekunesiqinisekiso sokuthi inkampani uFacebook usuthole ukuthi kunomsebenzi wayo emahhovisini aseSeattle osebambekile. Lokhu kudale ingebhe njengoba kuleya ndawo vele sekubikwe abahlanu asebedlule emhlabeni. UFacebook uvale amahhovisi awo. ENingizimu Afrika kulindeleke ukuthi bande abangahle bacele ukuba bake bathole ikhefu nokuyinto engakhinyabeza umnotho wezwe. Okwezingane zesikole kungahle kube yinkinga njengoba yize lezo zasemadolobheni nezidla izambane likapondo sezixubene nabazali njengoba elaboHlanga lizibonile izincwadi nemiyalezo , akuqondakali ukuthi lezo ezikobantu ziyokwazi yini ukuthola okufanayo noma sezoncika kuHulumeni nasemsakazweni.
nguMfo waKwaNomajalimane Mar 6, 2020